Transposh - Ligqobha imiqobo yolwimi - The transposh.org Wordpress kwiplagi wokubonisa nenkxaso site
inguqulelo 1.0.3 – Kutheni na ukuba ndibe liciko ekuthetheni umyalezo?
EyeThupha 5, 2018 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
Thina Siyavuya ukwazisa inguqulo entsha, izolo akhululwe.
Le nguqulo konke malunga isici imeyile, kunye nophuculo lolawulo translation kwabantu.
Lo msebenzi mail iya kwenza admin ukufumana izaziso ukuyiguqulela esamvukela kwisiza, kule version free uya kufumana umyalezo ngokukhawuleza inguqulelo entsha ithunyelwa. Xa bookmark us ukwanalo ukhetho ukuvumela imiyalezo eziphahle (ngoko ke uya kufumana umyalezo owodwa emva kokuba umsebenzisi ziye zaguqulelwa ezinye imitya kwisiza). Kwakhona unalo ithuba lokufumana luginyo yonke imihla iinguqulelo ezintsha ezenziwa kwisiza. Kusenokwenzeka kwakhona ukhethe idilesi imiyalezo ziya kuthunyelwa, nje ushiye kube mnyama email nomphathi ngayo.
Enye inkalo into ngcono olu guqulelo yi umhleli somva translation, ngoxa angavumeli okunene ukuba ukuguqulela kwi somva, ngoku uyakwazi ukulawula iinguqulelo kunye lula ngokusebenzisa ifitsha ucoco ukuba Kongezelelwa kunye nezenzo bulk ngoku lusebenza ngokwenene. 🙂
Sijonge phambili ukuva izimvo zakho, kwaye siyathemba uza konwabela sokukhululwa entsha
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele, izaziso Release, uhlaziyo lwesoftwe
inguqulelo 1.0.0 – Lifikile ixesha
Isilimela 16, 2018 ngokuthi umnikelo 4 izimvo
Transposh iye wayephila ukuba wokugqibela 10 iminyaka engaba. Siye njalo abagcina plugin ezihlaziyiweyo kwisayithi yethu apha, kwaye wazama ukuqinisekisa imisebenzi version wordpress.org.
Njengoko iinguqulelo anisasondelelananga kwaba nzima ngakumbi ukugcina iinguqulelo ezimbini. Ngoko ke version wordpress.org baqhawula engahoywanga.
Oku kutshintsha ukuqalela ukukhululwa yanamhlanje of version 1.0.0 kwi wordpress.org kunye version ngokupheleleyo 1.0.0.1, leyo eya kuba umgangatho entsha apha (iinguqulelo epheleleyo iza kuqukunjelwa kwesinye .1)
Yintoni umahluko phakathi kweenguqulelo?
Uguqulelo wordpress.org has a 5 Umda ulwimi, kwaye ayibandakanyi nayiphi widgets.
Inguqulelo epheleleyo inemisebenzi ngaphezulu, Akukho mida ulwimi, widgets inkxaso, kunye backlink site yethu (leyo ukuze ukhethe ukususa – bafunde izimiso)
Yiyiphi enye into entsha kule nguqulo?
ivavanywe ngokupheleleyo PHP 7, kufuneka susa annoyances nezaziso deprecation
inkxaso map Umthombo zokuba izikripthi zethu, ngokuvumela ukuba isiphene nabo bakhululeke
Ukutshintshela ukusuka FirePHP ukuya Chromelogger.
Yonwabela ukusebenzisa le nguqulo!
inguqulelo 0.9.9.2 – Akukho git
EyeDwarha 5, 2017 ngokuthi umnikelo 32 izimvo
Le nguqulo elide ekwenziweni, into entle kakhulu apha, fixes for WordPress 4.7 ne phezulu, iilwimi emininzi (117!)
Amanye fixes ukuhambisana kunye izinto njengesiqhelo.
Oku yindlela ixesha elide kunelo lifunekayo, kuba kwakufuneka ukuba ushintshele okusingqongileyo ukusuka CVS endala yaye ibukhali ukuya git entsha kwaye bethembisa. Leyo eye ngokwenene messed kunye kolu khupho. Ngethemba lokuba siya kukhupha iinguqulelo ezintsha ngexesha elifutshane.
Konwabele olu guqulelo.